घर जग्गा सूची सबै अन्य रियल इस्टेट सबै अन्य रियल इस्टेट
1 - 10 सूचीहरूको 94532
राम्रो, कोजी 1Bd / NN Bernardino मा 1Ba। फुटथिलको नजिक अवस्थित, शपिंग र स्कूलहरूको पैदल दूरी भित्र। यो प्यारो घर नयाँ फ्लोरिंग र रंग, एक आगो ठाउँ र पछाडो पछाडिको बार छ। एकल कार ग्यारेज र धुने / ड्रायर हुक अप। चुलो संग आउँछ। 1-2 व्यक्तिहरूको लागि उत्तम घर र पढ ...
जर्जटाउन, दक्षिण क्यारोलिनामा सम्पत्ति बिक्रीको लागि
बाहिरका चित्रहरूले यो घरको न्याय गर्दैन। प्रशंसा गर्न भित्र हेर्नुपर्दछ, भित्र सबै कुरा अनुकूल छ। कालो नदीमा नयाँ डक र एक फ्लोटिंग डकको साथ।
केनेथ वेल्स द्वारा प्रकाशित
2 शयनकक्ष 1 माथिल्लो तलामा अपार्टमेन्ट बिशेषताले ठूलो रूमहरू, मूल काठ फर्शिंग, विशाल भोजन क्षेत्र, अगाडि र पछाडि बालकनी क्षेत्रहरू, प्रशस्त भान्साकोठा र एक उपयोगिता कोठा हचमा निर्मितसँग। किराँदारहरूले ठूलो फिर्ता यार्डमा पहुँच पनि गर्नेछन् जुन पहिलो फ्लोर अपार्टमेन्टसँग पनि साझेदारी गरिएको छ। भाडामा लिने म ...
उत्प्रेरित विक्रेता !!! यो प्यारा 1 बेडरूम, 1 नुहाउने घर मेक्सिकोको खाडीमा सेता बलौटे समुद्री तटहरू मात्र एक माईल छ! एक विचित्र उष्णकटिबंधीय सेटिंग मा दूर Tucked। यो घर आज तपाईंको बनाउनुहोस्। निजी सुन्दर ब्याक यार्ड आँगन सेटिंग को साथ पोर्च मा स्क्रीनिंग। मनमोहक पैदल मार्ग र अधिक। केवल छत ...
HOLIDAYS को लागि मात्र समयमा !!! मनमोहक डुप्लेक्स उपलब्ध भइरहेको छ !!! यो आकर्षक2बेडरूम, 1 बाथ अपार्टमेन्टमा एक राम्रो खानपान भान्छाकोठा, HUGE रोमन बाथटब, बाडिएको इन आँगन क्षेत्र, र इनडोर धुने / ड्रायर हुकअप सुविधाहरू छन् !!! यदि तपाईं यस घरमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, पर्दैन! आवश्यकताहरू: कृपया ca पढ्नुहोस् ...
मेलिसा बजासा द्वारा प्रकाशित
प्रायोजक अपार्टमेन्ट / कुनै बोर्ड स्वीकृति छैन। खुल्ला किचन र स्टेनलेस स्टील उपकरणसहित ठूलो डिशवाशर सहित महान बेडरूमको अपार्टमेन्ट। यस अपार्टमेन्टमा उच्च सिलिingsहरू, सुन्दर आर्चिड विन्डोज, काठका फर्शहरू, खुला ईंटहरू छन् जुन सेतो र ठूलो कन्ट्रीमा पेन्ट गरिएको छ। अपार्टमेन्ट पूर्व ओभर अनुहार ...
मार्गरेट लेसी द्वारा प्रकाशित
तपाईं यसलाई याद गर्न चाहनुहुन्न! 2.54 एकडमा घरको राम्रो हेरचाह गरियो!2आउटबिल्डिंगहरू, नयाँ छत र hvac, ठूलो क्याबिनेट र टापुसहित ठूलो भान्छा, हार्डवुडका साथ भोजन कक्ष, एफपीको साथ ठूलो LR, सिटि room कोठा / अफिसको साथ मास्टर सुट। सेप उपयोगिता कोठा, विशाल फिर्ता डेक र कभर फ्रन्ट पोर्च ....
निकोल लॉकलेयर द्वारा प्रकाशित
फिर्ता फिर्ता देश यसको उत्कृष्ट मा बस्ने। लगभग फैलिएको ग्रामीण परिदृश्यको आनन्द लिनुहोस्, लगभग2एकड़ जंगलित शांतिलाई ढाक्दै। तपाईको बिहानको कफीको आनन्द लिनुहोस् मृग झोलको नजिक यो विशाल3बेडरूम,2बाथ होम प्रभावित गर्न को लागी पुनर्निर्माण गरिएको छ। नयाँ रंग, सुन्दर नयाँ फ्लोरिंग र एक शानदार नयाँ धातु ...
राम्रो3शयनकक्ष,2बाथ स्टार्टर घर एक विशाल। 70 एकर वृक्षले भरिएको मोरेस्भिलमा एक शान्त समुदायमा अवस्थित छ। Carport र ठूलो शेड रहनको लागि। छत 2015 र HVAC लाई प्रतिस्थापन गरियो 2012Estate- सम्पत्ती "जस्तो छ" बेच्दै। कुनै ज्ञात मुद्दाहरू वा सरोकारहरू छैनन्।
जुडी वेर्डर द्वारा प्रकाशित
स्थान: परिसर मध्य लcकशायरको यस विश्वविद्यालय शहरको मध्यमा अवस्थित प्रेस्टन, लन्काशायरको मार्श लेनमा अवस्थित छ। केवल केही मिनेट पैदल यात्रा विश्वविद्यालयबाट र रेलवे स्टेशन र मुख्य फिशरगेट शपिंग क्षेत्र कोठा कोठा सजिलै संग गर्न सकिन्छ सुनिश्चित गर्न को लागी ढोका मा ...
रियल एस्टेट "भूमि र यसमा भवनहरू मिलेर बनेको सम्पत्ति हो साथै प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै बाली, खनिज वा पानी; यस प्रकृतिको अचल सम्पत्ति; यसमा निहित ब्याज (पनि) वास्तविक सम्पत्तीको वस्तु, (अधिक सामान्य) भवनहरू वा सामान्य रूपमा आवास। साथै: घर जग्गाको कारोबार; जग्गा, भवनहरू वा आवास किन्नु, बिक्री गर्ने, वा भाडामा लिने व्यवसाय। " यो कानून कानुनी शब्द हो जसको कानूनी प्रणाली अ English्ग्रेजी सामान्य कानूनबाट लिइएको हो, जस्तै भारत, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, पाकिस्तान, अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्ड। मध्यस्थको लागि अचल सम्पत्ति मालिकहरूलाई समर्पित बिक्री र मार्केटिंग समर्थन कमिसनको बदली प्रदान गर्न यो एक सामान्य अभ्यास हो। उत्तर अमेरिकामा, यो मध्यस्थलाई एक घर जग्गा दलाल (वा रियाल्टर) को रूपमा दर्साइएको छ, जबकि युनाइटेड किंगडममा, मध्यस्थलाई एस्टेट एजेन्टको रूपमा संदर्भ गरिनेछ।